Manchester United oo loo caleemo saaray horyaalka English Premeirship-ka (Sawiro) – SBC
Manchester United oo loo caleemo saaray horyaalka English Premeirship-ka (Sawiro)
Manchester United ayaa galabta loo boqrey horyaalka English Premier League iyadoo lagu gudoonsiiyey ciyaartoyda & macalinka Man United koobka gurigoodat Old Trafford.
Guusha Manchester United ee ay ku hantisay koobka Premier League-ga ayaa u xaqiiqowdey todobaadkii hore ciyaartii ay guriga Blackburn kula ciyaareen kooxda ay iska leeyihiin Maalqabeenada reer Hindiya ee ka ganacsada hilibka Digaaga.
Man United gudoonsiinta koobka la gudoonsiiyey waxay maanta u aheyd xaalad riwaayad ah oo ciyaar adag ay kala kulmeen kooxda Blacpool oo ka baxsaneysya godka Sera B-da ee ay ku dhacdey.
Gool uu dhaliyey daqiiqadii 21-aad ciyaaryahanka reer Kuuriyada Koonfireed Park Ji-Sung, ayaa niyad jab ku ridey kooxda Blackpool oo doonaysay inay ku sii jirto Premiership-ka oo sanadkan ay soo gashay, laakiin daqiiqadii 40-aad ayaa ciyaaryahanka Adam wuxuu Man United kaga naxsadey laad xor ah (Free Kick), isagoo ciyaarta ka dhigay 1-1 inay ku soo dhamaato qaybtii hore.
Qaybtii 2-aad ee ciyaarta ciyaaryahanka Taylor-Fletcher ayaa daqiiqadii 57-aad wuxuu gool caaqibo leh si xarago leh u suray shabaqa Man United, waxaana goolkaasi uu keenay in taageerayaasha Blackpool oo telefoono kula socdey natiijooyinka ciyaaraha kale ay si weyn ugu farxaan labada gool maadama kooxaha Birmingham, Wigan & Wolves ay iyaguna u muuqanayeen inay hoos ugu dhacaan kooxaha heerka labaad.
Balse daqiiqadii 62-aad ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Man United Anderson ayaa gool la soo dhisay si caaqibo leh u dhaliyey, iyadoo ciyaartii ay noqotey 2-2.
Laakiin daqiiqadii 74-aad Blackpool waxaa u soo hoyotey tacsi ka dib markii ciyaaryahanka Evatt uu iska dhaliyey gool, waxaana ciyaartii ay noqotey 2-2.
Daqiiqadii 81-aad kooxda Blkacpool oo rajo beel ah ayaa waxaa sii dhigay ciyaaryahanka Owen oo badal ku soo galay kaasi oo ciyaartii ka dhigay 4-2 oo ay Manchester United ku qabsatey hogaankii guud ahaan ciyaarta.
Inkastoo reer Blackpool ay is dhiirigaliyeen, hadana wax la taaban karo ma aanay keenin, waxaana ciyaartii ay ku soo dhamaatey Manchester United oo qosol ku dhamaysatey & Blackpool oo godka kooxaha heerka labaad loo sii galbiyey.
Ugu dambeynii Manchester United waxaa la gudoonsiiyey koobkii Premiership-ka, iyagoo noqdey horyaalka sanadkan 2010/2011, isla markaana noqdey kooxda kaliya ee England ka dhisan ee 19 koob ku guuleysatey, waxaana ay dhaafeen Livepool oo ay wada haysteen mid 19 koob.